Nannies Job Description / Functions Ary Accountability Template – JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Nannies Job Description / Functions Ary Accountability Template
Nannies Job Description / Functions Ary Accountability Template
Mikarakara ny ankizy ao amin'ny fianakaviana tena manokana sy manome fanampiana sy ny fahaizany manokana amin'ny fanatanterahana ny fihetseham-pony rehefa zanak'osy, ara-batana, ara-tsaina, sy ny fiaraha-monina ny faniriana. Indraindray dia ahitana andraikitra dia afaka manomana sakafo sy ny fanasan-damba, Prep sy ny akanjo tsara, fiangonana, tia asa sy ny Tours, famaizana, manan-tsaina fientanentanana, voambolana asa, ary ny fitaterana.
Manaova vonjy taitra na cardiopulmonary resuscitation (ny famelomana) rehefa andrasana.
lalàna Amin'ny ankizy’ fialam-boly sy ny matory intervals ambain-dain'ny fandaharany.
Hihaona tsy tapaka miaraka amin'ny ray aman-dreny mba hankany ankizy’ tapaka sy ny fandrosoana.
Afaka manomana sy hanampy ary dia sakafo tsakitsaky-mandanjalanja sakafo ho an'ny ankizy.
Manoro hevitra ny ankizy ao amin'ny fitondran-tena azo antoka, ohatra mitady fanampiana olon-dehibe ny fisorohana ny fifandraisana, na mampidi-doza no tia mampiasa zavatra ary rehefa naharitra ny eny an-dalana.
Mandamina sy carryout mandrakizay ivelan'ny trano fialam-boly tsara, toy ny lalao, zavakanto sy ny asa-tanana, fanatanjahan-tena, mandeha, ary milalao-daty.
jereo ny ankizy’ asa momba ny olana, Diniho Temp, fitaterana ankizy dokotera, na hizara fanafody, araka ny mifantoka, foana tanora’ Wellness.
Mamaritra tsara sy hampiroborobo ny fahazarana ara-kolontsaina na ho an'ny hafa mba hampitombo ny fandrosoana ny fifandraisana amin'ny fifandraisana sy ny fifaneraserana ny fahaiza-manao.
Hanampy ny ray aman-dreny sy hanorina mampihatra ny fanaraha-maso ny fandaharan'asa mba hampiroboroboana ny ankizy niriany ny fitondran-tena.
Ampio Monitor na hanorina tokantrano fandaharam-potoana.
Tantano sy hanampy amin'ny fikarohana.
Fantaro raharaha marina sy ny valisoa mifantoka fihetsika mba hamporisihana ny fanatsarana ny selfcontrol, matoky tena, sy andraikitra.
Transport ankizy anjerimanontolo, fivoahana izay ara-tsosialy, sy ny fitsaboana fivoriana.
Fanadiovana sy ny fitondran-tena mifandray amin'ny andraikitra manadio-dia ny ankizy fikarakarana.
Hampianatra sy hitari-dalana tanora ao amin'ny fivoaran'ny ohatra manana, pototry, ary ny efitra fandroana asa, fiantohana ara-pahasalamana sy ny fahazarana manokana.
Miaro ny volavolan-dalàna antontan-taratasy fandoavam-bola, sakafo fotoana, ary mankafy.
Hanatanteraka sy vanim-potoana hanofana-tsara ny asa, toy ny ohatra tontonana mankafy, fianarana, sy ny zavakanto sy ny asa-tanana mba hampaherezana misaina fivoaran'ny tanora.
Manafoana ary hanana fari-sahaza sy fitsipika, mba hamokarana ny rivotra iainana voaro ho an'ny tanora.
Job Activities Tsy maintsy
Fahazoanao ny hevitr'izay vakinao-fahafantarana fehintsoratra, ary voasoratra andinin-tsoratra ao amin'ny asa izay mifandraika amin'ny antontan-taratasy.
Fahaiza-mihaino-Inona olon-kafa hoe manolotra tanteraka ny saina,, mampiasa ny fotoana mba hahatakatra ny tsipiriany namoronana, nanontany fanontaniana toy ny marina, ary tsy mesmerizing amin'ny fotoana izay dratsy.
Ao amin'ny famoronana-taratasy toy ny mendrika izay ilain'ny niresaka mahomby ny mpijery,.
Niady hevitra-hiresaka amin'ny olona ny manonona angona pahombiazana.
Technology-fampiasana ara-pitsaboana fitsipika sy teknika mba hamahana olana.
Mampiasa mitsikera-lojika ka nikasa hamantarana ny fahaiza-manao sy ny fahalemen'ny hevitra, fanafody hafa na manakaiky ny fahoriana.
Active-Learning-fahatakarana ny soa azo avy amin'ny zava-misy ho an'ny vaovao farany sy ny ho avy hamaha olana-fanapahan-kevitra sy ny.
Ny fianarana Paikady-ny fifidianana sy ny fomba fijery sy ny educationANDtutorial mampiasa fitsaboana mendrika ny toe-javatra, na rehefa mahafehy Coaching olana izay vaovao.
Fanaraha-maso-TrackingPEREvaluating fahombiazan'ny orinasa, olona hafa, na tena mandinika dingana fanitsiana na hamorona fivoaran-draharaha.
Social fidirana-Ny hoe mahalala othersI fironana sy mahafantatra ny antony rehefa raha manao.
Fandrindrana-Manova zavatra raha oharina amin'ny olon-kafa’ asa.
Salesmanship-mahomby hafa mba manova fitondran-tena na ny lohany.
Fifampiraharahana-Fandraisana ny hafa miaraka sy miezaka ny hampihavana fiovana.
Fanofanana-Subscribe to ny hafa ny fomba tena hanaovana ny hetsika.
Service Orientation-tsara mitady fomba mba hahafahan'ny olona.
Famahana olana Advanced--mampiavaka olana sarotra sy critiquing tsipiriany izay mifandray hampihatra safidy sy mandinika sy hampivelarana safidy.
Asa nisafo Analysis-maniry sy ny entana zavatra takiana alohan'ny hanaovana ny fisehon'ny.
Engineering Design-Tsy sahirana vokatra na ny fanaovana sy ny teknolojia ilaina mba hiasa mpampiasa.
Gear Selection-Famantarana fitaovana sy ny fitaovana ilaina ny karazana zava-dehibe ny manao ny asa.
Andian-fametrahana fangatahana, milina, cabling, na fitaovana mba hihaona fepetra ankapobeny.
Encoding-composant solosaina fandaharan'asa momba ny asa izay maro.
Asa Tracking-Viewing dials, tondro, famantarana na fanampiny mba ho azo antoka ny fitaovana misy manao araka ny tokony ho.
Ny asa sy ny tahony-Fehezo asa ny fitaovana na fandaharana.
Maintenance-famonoana mahazatra sy ny fikojakojana ny fitaovana, rehefa manapa-kevitra ary inona no karazana fikojakojana ho ilaina.
Fanamboarana-Inona no Atao hoe anton-javatra ao ambadiky ny fandidiana Fahadisoana sy manapa-kevitra momba izay tokony hatao na dia iray akory izany.
Koa namboatra-fanamboarana fitaovana na modely mampiasa ny fitaovana ilaina.
Quality Control Research-manao fanadihadiana sy ny fitiliana ny vokatra, mpamatsy, na teknika hitsara kalitao na ny fahombiazan'ny.
Manjaka sy ny fanapahan-kevitra-fisaintsainana ny havany vola lany sy ny tombontsoa ny fepetra azo inoana fa mba hitadiavana ny anankiray izay no tsara indrindra mifanaraka.
Analysis-fanapahany hevitra ny karazana fandaharana dia tsy maintsy manao sy ny fomba fanitsiana amin'ny raharaham-barotra, toe-javatra, ary ny toe-javatra dia mety hisy vokany eo vokatra.
Fomba mamaritra Analysis-hita ny fomba na ny rafitra fampisehoana ary koa ny zavatra nanana ilaina ny hanatsara na tsara fahombiazany, mikasika ny tanjona ny milina.
Time-Management-Fehezo ny hafa’ fotoana miaraka amin'ny vanim-potoana manokana iray ny.
Fitantanana ny tahiry-mamaritra ny fomba vola miditra dia ho lany fa ny asa tanterahana amin'ny, ary nampamoahana an'i ireo vola lany.
Fomba fanaraha-maso ny Product-hahita sy mahazo ny mety fampiasana ny fitaovana, Toetoetra, ary nanana vatsy ilaina ny manao asa voafantina.
Fanaraha-maso ny Personnel Resources-Hahazo, mampahery, ary mikendry ry namana raha miasa, famaritana ny mahomby indrindra ry namana noho ny asa.
High School Degree (na GED na High School Equivalence Certification)
Over 1 yr, manodidina 24 volana ary anisan'izany ny,
Task Authority Skills Fepetra
fikirizana – %
Ahiahiny momba ny Hafa – %
Hifanaraka amin'ny zava-/ Freedom – %
mieritreritra – %